ကားမှာထည့်နေတဲ့ octane ဆီဆိုတာဘာလဲ?
92 ၊ 95 ဆိုတာ ဘာတွေလဲ? ပရီမီယမ် ဓာတ်ဆီ၊ ပရီမီယမ် ဒီဇယ်ဆီဆိုတာဘာလဲ?
ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေ တော်တော်များများမှာ ရောင်းနေတဲ့ အောက်တိန်းဆီ (octane ) 92 ၊ 95 ဆီဆိုတာလေးနည်းနည်းရှင်းပြချင်လို့ပါ။
တော်တော်များများခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေကြတဲ့ အောက်တိန်းဆိုတာ ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကနေလာတဲ့ hydrocarbon ဓာတ်ပေါင်းစုတွေထဲက နာမည်တစ်ခုပါ။
အခု ကားတွေမှာထည့်တဲ့ ဓာတ်ဆီတွေကို ဘာကြောင့် အောက်တိန်းဆီလို့ခေါ်ကြတာလဲဆိုရင် ဓာတ်ဆီ (gasoline) ရဲ့အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေးပြည့်မီ/မမီကို အဲဒီဓာတ်ဆီထဲမှာ အောက်တိန်းအရေအတွက်ဘယ်လောက်ပါဝင်သလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာယူလို့ပါပဲ။
Octane rating method လို့လဲခေါ်သလို၊ Research Octane Number (RON) လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ကားတော်တော်များများမှာလည်း 92 RON ၊ 95 RON ဆိုပြီးကပ်ထားတာကို တွေ့မြင်ကြမှာပါ။
Octane number က ကားအင်ဂျင်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေသလဲ?
ဓာတ်ဆီရဲ့ အောက်တိန်း အရည်အသွေးအနိမ့်အမြင့်တွေဟာ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တစ်ခုရဲ့ compression ratio (ဖိသိပ်မှုအချိုး) နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေပါတယ်။ ဖိသိပ်မှုအားကောင်းတဲ့ အင်ဂျင်တစ်ခုထဲကို အောက်တိန်းနံပါတ်နိမ့်တဲ့ (တစ်နည်း) ဆီအရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ ဓာတ်ဆီထည့်လိုက်မိတယ်ဆိုရင် engine knocking and pre-ignition ဆိုတဲ့ အင်ဂျင်မီးခေါက်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေလာရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆီအရည်အသွေးနိမ့်ရင် အင်ဂျင်မီးခေါက်ရသလဲဆိုတော့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေမှာ လေနဲ့ဆီကို ရောနှော၊ piston ကနေဖိသိပ်ပြီးမှ ပလပ်ကနေ မီးပွားခတ် မီးလောင်ရပါတယ်။ အဲဒီလိုနေရာမှာ အောက်တိန်းအရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ဆီကို အသုံးပြုမိလိုက်တယ်ဆို ပလပ်က မီးပွားမခတ်ခင် piston ကနေဖိသိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ ဓာတ်ဆီဟာ (self-ignition) အလိုအလျောက်သူ့ဘာသာ မီးထလောင်ကျွမ်းပါတယ်။ အဲဒီအတွက် engine timing တွေအောက်ကုန်ပြီး အင်ဂျင်မီးခေါက်သံတွေကြားရပါတယ်။ ကာလကြာရှည်လာရင် အင်ဂျင်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
Octane number မြင့်လေလေ piston ကနေဖိသိပ်တဲ့ compression ratio (ဖိသိပ်မှုအချိုး) ကို ပိုခံနိုင်လေလေဖြစ်ပြီး ညင်သာချောမွေတဲ့ အင်ဂျင်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ Research Octane Number (RON) တွေကို တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာ 90 ကနေ 92 RON ပတ်ဝန်းကျင် ကို regular ပုံမှန် ဓာတ်ဆီလို့ခေါ်ပြီး 95 RON ကနေစလို့ 96 ၊ 97 ကနေ 100 RON တွေကိုတော့ (premium) ပရီမီယံ ဓာတ်ဆီလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အောက်တိန်းအရည်အသွေး 95 RON တွေကိုအဆင့်မြင့်ဓာတ်ဆီအဖြစ် အများဆုံးရောင်းချနေပြီး အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာတော့ 95 အထက် အောက်တိန်းနံပါတ်မြင့်တဲ့ ဆီအမျိုးအစားတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
မှတ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ အင်ဂျင်ရဲ့ ဖိသိပ်မှုအရည်အသွေး တစ်နည်း အင်ဂျင်ပါဝါမြင့်တဲ့ကားတွေမှာ ပရီမီယံအဆင့် အောက်တိန်းနံပါတ်အမြင့် ဓာတ်ဆီတွေကိုအသုံးပြုသင့်ပြီး၊ အင်ဂျင်ပါဝါကျနေတဲ့ကားတွေမှာတော့ အောက်တိန်းနံပါတ်အမြင့် ပရီမီယံဂရိတ် ဓာတ်ဆီကိုအသုံးပြုလျင်တောင် အကျိုးကျေးဇူးအနည်းငယ်ပဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက octane ဆီခေါ် ပရီမီယံ ဓာတ်ဆီအကြောင်းပါ။
ဓာတ်ဆီအရည်အသွေးကို အောက်တိန်းနံပါတ်နဲ့တိုင်းတာလို့ (octane) ဆီဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေတော်တော်များများသိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဒီဇယ်ရဲ့ အဆင့်အရည်အသွေး
ကိုတိုင်းတာတဲ့ ယူနစ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုတော့ ဆီတိန်းနံပါတ် (cetane number) လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြင်ဖူးသလောက် ဆီဆိုင်တော်တော်များများမှာ ဆီတိန်းနံပါတ်ဆိုပြီး ဖေါ်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ ဒီဇယ်ကိုတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဓာတ်ဆီလိုပဲ ဆီတိန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ပါဝင်သလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာပြီး ဆီထဲမှာ အခြား energy ဘယ်လောက်ပါသလဲ စေးပျစ်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ ချောဆီအဆင့်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ ဆာလဖာပါဝင်မှုနှုန်းအနည်းအများဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာတွေပါတိုင်းတာပြီး ပုံမှန်ဒီဇယ်၊ ပရီမီယံဒီဇယ်ဆိုတဲ့ စံနှုန်းတွေသတ်မှတ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်အပေါ် ပရီမီယံဒီဇယ်ရဲ့ သက်ရောက်မှုကတော့ အပေါ်က ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်မှာ အောက်တိန်းအရည်အသွေးအနိမ့်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးသက်ရောက်သလိုပါပဲ။ ပုံမှန်အရည်အသွေး ဒီဇယ်တွေမှာ ဆီတိန်း (cetane number) 40 -45 လောက်ရှိပြီး၊ 53-55 ကနေစလို့ ဆီတိန်းနံပါတ်အမြင့် ဆီတွေကိုတော့ (premium diesel) ပရီမီယံဂရိတ်ဒီဇယ်ဆိုပြီး စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကတော့ ပရီမီယံဒီဇယ်အကြောင်းပါ။
မသန့်ရှင်းတဲ့၊ အရည်အသွေးမမီတဲ့ ဆီတွေသုံးစွဲမိရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ?
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဓာတ်ဆီဆိုင်တော်တော်များများရဲ့ ဆီအရည်အသွေး မပြည့်မီမှုကြောင့် အများဆုံးခံစားနေရတဲ့ ကားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ပြဿနာက မီးသံခေါက်တာပါ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ မီးသံခေါက်တယ်၊ အင်ဂျင်အဆွဲအရုန်း performance ကျရတဲ့ အချက်များစွာထဲက အချက်တစ်ချက်ဟာ ဆီအရည်အသွေးမပြည့်မီမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ ဆီအရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့အတွက် engine ရဲ့ compression ratio အပြည့်အဝ မရောက်သေးခင်မှာပဲ အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့ လောင်စာဆီတွေဟာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး ဖိသိပ်နေတဲ့ piston ကို ပြန်လည်တွန်းကန်တဲ့အတွက် မလိုအပ်တဲ့ မီးသံခေါက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီး အင်ဂျင်ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးပါတယ်။
၂။ Spark plugs တွေ သက်တမ်းမကုန်ခင် ပျက်စီးမယ်
မသန့်ရှင်းတဲ့ဆီ၊ အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ဆီတွေကို သုံးစွဲမိလို့ နောက်ထပ်အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာက spark plugs တွေအချိန်မတိုင်ခင် ပျက်စီးတာပါ။ အရည်သွေးနိမ့်တဲ့ဆီတွေကို မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့အခါ၊ နိမ့်ကျတဲ့ဆီအရည်အသွေးကြောင့် လောင်စာဆီတွေဟာ အကုန်မလောင်ကျွမ်းဘဲ carbon ကြေးတွေအဖြစ်နဲ့ spark plugs ငုတ်တွေမှာကပ်ညှိကုန်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကြေးတွေတက်လာတာများတဲ့အခါ spark plugs တွေရဲ့ performance တွေကို တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာစေပြီး နောက်ဆုံးပျက်စီးစေပါတော့တယ်။ ဒီလိုစပြီး ပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့ သင့်ကားရဲ့ အဆွဲအရုန်းကျပြီး အင်ဂျင်တုန်ခါမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာမလွဲမသွေပါပဲ။
၃။ ဆီတိုင်ကီထဲက fuel pump တွေပျက်စီးမယ်
အခုနောက်ပိုင်း EFI ကားတွေမှာ ဆီတိုင်ကီထဲကနေ အင်ဂျင်ထံကို လောင်စာဆီတွေမောင်းနှင်ပေးမယ် fuel pump တွေရှိကြပါတယ်။ EFI Pump လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ ဒီပန့်တွေလည်း အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ ဆီတွေကြောင့်၊ အမှုန်အမွှားနဲ့ ကြေးတွေပိတ်ဆို့ပြီး pump pressure ကျတာ၊ (pump filter) ဆီစစ်ဇကာတွေ ကြေးပိတ်တာ၊ ပန့်ပျက်စီးတာတွေဖြစ်စေပြန်ပါတယ်။
တချို့အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းလွန်းတဲ့ဆီဆိုင်တွေ၊ ခရီးသွားရင်း ကြုံရာဆိုင်တွေမှာ ဆီဖြည့်မိလို့ ကားမောင်းပြီး မကြာခင် ကားထိုးရပ်သွားတာတွေကလည်း ဒီလိုဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်တွေ ပျက်စီးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် ဆီပန့်ဇကာတွေကို ဖြုတ်ပြီးဆေးကြောတာ၊ ဆီပန့်ရဲ့ pressure တွေကို တိုင်းတာတွေလုပ်ရပါမယ်။ ဆီစစ်ဇကာတွေ ဆိုးရွားစွာ ညစ်ညမ်းနေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆီပန့်ရဲ့ သတ်မှတ် pressure အောက် ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ ဆီပန့်ဇကာနဲ့ ဆီပန့်အသစ် လဲလည်တပ်ဆင်မှ သင့်ကားအင်ဂျင်လည်း ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကားတော်တော်များများ အဆွဲအရုန်းကျပြီဆို ကာဗွန်ဂျိုးဆေးတယ်ဆိုတာ အတော်လေးကို ခေတ်စားလာပါတယ်။ ကာဗွန်ဂျိုးကပ်ခြင်းရဲ့ အဓိက ပြဿနာတစ်ခုကလည်း ဆီအရည်အသွေးနဲ့သက်ဆိုင်နေပြန်ပါတယ်။ ဆီအရည်သွေးနိမ့်မှုကြောင့် မီးလောင်ခန်းထဲ အကုန်မလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ အကကြွင်းအကျန် carbon တွေဟာ piston ရဲ့ ထိပ်တည့်တည့်မှာ ထုနဲ့ ထည်နဲ့ ကပ်ညှိကုန်ပြန်ပါတယ်။ ဒါကိုပဲ ကာဗွန်ဂျိုးကပ်တယ်လို့ ခေါ်ဝေါ်ပြီး မီးသံခေါက်မှုရဲ့ တွဲဖက်တရားခံလည်းဖြစ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက ဆီအရည်အသွေးမမှန်မှု၊ အရည်အသွေး မပြည့်ဝမှုတွေကြောင့် အဖြစ်အများဆုံး ကားအင်ဂျင်ပျက်စီးဆုံးရှူံးမှုတွ၊ မလိုအပ်ဘဲ အပိုကုန်ကျနိုင်တဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျရမှုတွေရဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ပြထားတာပါ။
အချုပ်ပြောရရင် ဓာတ်ဆီအရည်အသွေးအနိမ့်အမြင့်ကို octane number နဲ့တိုင်းတာပြီး၊ ဒီဇယ်အရည်အသွေးအနိမ့်အမြင့်ကိုတော့ cetane number နဲ့တိုင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ တိုးတက်ကြပါစေ။